चिन्ता नगर्नुस्, आवश्यकताअनुसार १९५० को सन्धी संशोधन हुन्छ : भगतसिंह कोसियारी
चिन्ता नगर्नुस्, आवश्यकताअनुसार १९५० को सन्धी संशोधन हुन्छ : कोसियारी
सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री भगतसिंह कोशीयारी नेपालको ’boutमा अलि बढि चासो राख्ने नेतामध्ये पर्छन् । नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहका भारततर्फका संयोजक समेत रहेका कोशियारी दुई देशबिचको सम्बन्धका ’boutमा अलि बढि जानकार पनि छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई समेत नेपाल मामिलामा सल्लाह/सुझाव दिने हैसियत राख्ने पाका नेता कोशियारीसँग ऋषि धमलाले अन्तरवार्ता लिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा धमलाले कोशियारीको निवासमै पुगेर दुई देशबिचको सम्बन्ध र अहिलेको भ्रमणका विषयमा कुरा गरेका छन् । कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तीन दिने भारत भ्रमणको उपलब्धि के हुन सक्छ ?
यो त सरकारी भ्रमण हो । दुई सरकारबिच केके तयारी भइरहेको छ, त्यो मलाई थाहा छैन । यो त सरकारी प्रवक्ताले बताउन सक्छ । सरकारको आफ्नै एजेण्डा होला ।
दुई देशबिचको सहयोग र सम्बन्धका ’boutमा केही अनुमान त लगाउन सकिन्छ नि ?
दुई देशलाई एक अर्काको सहयोग चाहिन्छ । सहकार्यको आवश्यकता छ । विकासका लाग पारस्परिक सम्बन्धको खाँचो छ । भारतले पनि नेपालको उन्नति नै चाहेको छ । त्यसका लागि नेपालले चाहेको सहयोग दिन भारतले कोसिस गर्छ ।
नेपालको विकास र समृद्धिको एजेण्डामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मादीले कस्तो सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
सहयोगको धेरै कुरा चलिरहेको छ । विगतदेखि नै विभिन्न ठूला योजना सुरुवात गरिएको छ । तर पूरा हुन सकेको छैन । नेपाली जनताले नै सहयोगलाई स्वागत गर्दैनन् भने कसरी हुन्छ ? नेपालमा काम गर्ने ठाउँमा अवरोध छ । पहिले वर्किङ कल्चर बनाउनुपर्छ ।
यसपटकको भ्रमणले नेपालमा रेल सेवा विस्तारका लागि कस्तो भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
दुई पक्षबिच बातचित भयो भने त भइहाल्छ नि । यो त दुईपक्षबिचको एजेण्डा र निष्कर्षमा भर पर्ने कुरा हो ।
नेपालमा भारत र चिन दुवैतर्फबाट रेल ल्याउने कुरा चलिरहेको छ । यसका लागि समझदारी बन्न सक्छ ?
चिनको रेले चिनकै काम हो । मेरो होइन । नेपालले चीनबाट रेल ल्याओस् कि तेल ल्याओस्, त्यो स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको कुरा हो । यसमा भारतले यो गर वा नगर भन्दैन । भारतबाट रेल सेवा नेपालमा जोड्ने हो भने नेपालबाट भारत आउने र भारतबाट नेपाल जाने नागरिकलाई सहज हुन्छ । लार्खौँको संख्यामा नेपाली भारत आउँछन् ।
नेपाल–भारतबिच जलमार्गको सम्भावना कस्तो छ ।
भारत त सहकार्य गर्न तयार छ । रेल, जमिन र जल तिनैवटा मार्ग महत्वपूर्ण छ । हवाई मार्ग पनि महत्वपूर्ण छ । तर नेपालले पनि विचार गर्नुपर्छ ।
महाकाली सन्धी भएको २० वर्ष भयो । किन कार्यान्वयन हुन सकेन ? पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना किन कार्यान्वयन हुन सकेन ।
यो त नेपालकै विरोधका कारण हो । नेपालमा काम गर्ने ठाउँमा अवरोध छ । पहिले वर्किङ कल्चर बनाउनुपर्छ । नेपालमा त्यो वातावरण भएको भए पञ्चेश्वर ५० वर्षअघि नै बन्ने थियो । बल्ल सबै पक्ष सहमत भएर २ वर्षदेखि यो अघि बढेको छ । कार्यान्वयनमा ढिला हुनुमा भारतको दोष छैन । तर योजना बनाउँदा नेपाल र भारतका कयौँ गाउँ विस्थापित हुने अवस्था छ । यस्ता समस्याको उचित समाधान गर्नुपर्छ । इच्छा भयो भने सबै समस्या समाधान हुन्छ ।
नेपालको संविधानलाई भारतले किन प्रशंसा गर्न सकेन ?
पटकपटक यो प्रश्न किन ? हामी त सगरमाथादेखि लिएर लुम्बिनी, जनकपुर, सबैको प्रशंसा गर्छौँ । ऋषिजीको पनि धरै प्रशंसा गर्छौँ । अब कति प्रशंसा मागिरहने ? नेपालको संविधानमा भएको समस्या त मैले वा भारतले समाधान गर्ने होइन, नेपालको काम हो ।
नेपालको विकास र समृद्धिमा यसपटक विशेष सहयोग के हुन सक्छ ?
नेपालको केही इच्छा होला, त्यहीअनुसार भारतीय प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्लान् । रेल, जलमार्ग, विजुली, अरु पनि चिज छ ।
दुई देशबिचको सिमा सुरक्षाको समस्या कसरी समधान हुन सक्छ ?
सिमा सुरक्षाका विषयमा नेपाल–भारतबिच कुनै डर छैन ।
नेपालमा भारतविरोधी गतिविधि रोक्ने’bout केही एजेण्डा छ ?
भारतमै पनि भारतविरोधी गतिविधी हुन्छ । नेपालमा पनि हुन सक्ला । दुई, चार जना भारत विरोधी भएर के हुन्छ र ? सबै नेपाली जनता त प्रो इन्डियन नै हुन् नि । २,४ जना काठमाण्डौमा बसेर भारतविरोधी गतिविधी गर्दैमा नेपाल नै भारत विरोधी त हुन सक्दैन । यो त सपनामा पनि कल्पना गर्न सकिदैन ।
१९५० को सन्धीका ’boutमा के भन्नुहुन्छ ?
चिन्ता नगर्नुस् । नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको बैठकले टुङ्गो लगाउँछ । अब तीन महिला पर्खनुस्, फाइनल हुन्छ । जे हुन्छ त्यसको रिपोर्ट तीन महिनामा सार्वजनिक गर्छौँ । पूर्वजलाई बेकुफ मान्ने हो भने सन्धी खतम गरौँ, पूर्वज होसियार थिए भने अहिले आवश्यकाअनुसार संशोधन गरौँला । अब पूर्वजलाई बेकुफ मान्नुहुन्छ कि होसियार ? त्यसैले आवश्यकताअनुसार सन्धी संशोधन हुन सक्छ । प्रवुद्ध समुह नेपाल र भारतको छुट्टाछुट्टै होइन, हामी एउटै देशको समुह जस्तै गरी काम गरिरहेका छौँ ।
कार्यक्रम शिक्षाको, अख्तियारी गृहको !
शहरी विपद व्यवस्थापन योजनाको मूलप्रवाहीकरणमा जोड
गुरुयोजना निर्माण गरी विकास निर्माण गर्नुपर्छ : प्रचण्ड
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प अर्काेहप्ता चीन जाने
भाषण गर्दागर्दै ओलीले भावुक बन्दै भने,‘दुई चारवर्ष बाँचे भने विरोध गर्नेलाई रेल चढाइदिन्छु’
धरान इन्जिनियरिङका विद्यार्थी शुल्क वृद्धिको विरोधगर्दे अनशनमा
वामपन्थी सरकारले मात्रै जनताको विकासको चाहना पूरा गर्छ : दाहाल